နှံကောင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အကြားအာရုံ | ဒါကသူ့အလိုလိုဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား
မိသားစုအတွက် အကူအညီ မိတ်ဆွေနဲ့ ရင်းနှီးလွန်းတဲ့အခါ
တွေ့ဆုံ​မေးမြန်းခန်း ဇီဝဓာတုပညာရှင်တစ်ဦးက ဘုရားသခင်ကို ဘာကြောင့်ယုံကြည်လာကြောင်းရှင်းပြ
ဒါဟာ သူ့အလိုလို ဖြစ်လာနိုင်ပါ့မလား နှံကောင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အကြားအာရုံ
နိုးလော့! | အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကီရွန်ဒီ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ချီတွန်ဂါ ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ စင်ဟာလာ စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တဟီတီ တီဂရင်ယာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေး ပန်ဂါဆီနန် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဖီဂျီ ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရှိုစာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အီတလီ အီလိုကို အေးဝေး
နှံကောင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အကြားအာရုံ
တောင်အမေရိက ခြုံပုတ်နေနှံကောင် (katydid) ရဲ့နားဟာ တစ်မီလီမီတာထက်သေးပေမဲ့ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံက လူ့ နားလုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ တူတယ်။ ဒီနှံကောင်ဟာ ဟိုးအဝေးကြီးကနေတောင် အသံလှိုင်းကို ခွဲခြားသိနိုင်တယ်။ ဥပမာ၊ တခြားနှံကောင်ဆီကအသံလား၊ သားကောင်ဖမ်းဖို့လာနေတဲ့ လင်းနို့ရဲ့ အသံလားဆိုတာကို ခွဲခြားသိနိုင်တယ်။
သုံးသပ်ကြည့်ပါ– နှံကောင်ရဲ့နားက ရှေ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်မှာ ရှိတယ်။ လူ့ နားလိုပဲ နှံကောင်ရဲ့နားက အသံလှိုင်းကိုဖမ်းပြီး ပိုင်းခြားသိနိုင်တယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက နှံကောင်ရဲ့နားအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုကို တွေ့ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ လုံးလုံးရှည်ရှည် အရည်အိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲဒီအင်္ဂါကို အသံကြားနိုင်တဲ့ အရည်အိတ်ငယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီအရည်အိတ်ငယ်ဟာ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့ နားနဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံချင်းတူပေမဲ့ အရွယ်အစားကတော့ အလွန်သေးငယ်ပါတယ်။ အဲဒီအရည်အိတ်ငယ်ကြောင့်ပဲ ထူးခြားတဲ့အကြားအာရုံရှိတာဖြစ်တယ်။
ဒီတွေ့ရှိချက်ကနေ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ “လက်ရှိထက်သေးငယ်ပြီး ပိုကြားနိုင်တဲ့ နားကြားကိရိယာတွေ တီထွင်ဖို့ အကူအညီဖြစ်စေတယ်” လို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဘရစ်စတိုတက္ကသိုလ်က ဇီဝဗေဒပါမောက္ခ ဒံနီယယ် ရောဘတ်က ပြောတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ တီဗွီဓာတ်မှန်အပါအဝင် နှုန်းလွန်အသံလှိုင်းနည်းပညာတွေ ပိုပြီးတိုးတက်လာမယ်လို့ သုတေသီတွေ ယုံကြည်ကြတယ်။
သင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ နှံကောင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အကြားအာရုံဟာ သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလား။ ဒါမှမဟုတ် စနစ်တကျ ပုံစံရေးဆွဲခံထားရတာလား။
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃ | ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာသုံးမျိုး
နိုးလော့! အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃ | ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာသုံးမျိုး